“Soomaaliya waxaa joogta 132 hay’addood, oo badankooda haya shaqooyinkii loogu talagalay Wasaarradaha” – Kalfadhi
October 14, 2020 October 14, 2020 Hassan Istiila
20-kii bishii Julay ee sannadkan 2020, Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka Calaamiga ah ee Soomaaliya, Amb Jamaal Maxamed Xasan, ayaa Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya horgeeyay, kaddibna u akhriyay sharciga hay’addaha aan dowliga aheyn.
Wasiir Jamaal ayaa xildhibaannada u sheegay in dalka Soomaaliya ay joogaan 132 hay’addood oo calami ah, inta la ogyahay, kuwaas oo badankooda haya shaqooyinkii loogu talagalay hay’addaha dowladda iyo wasaarradaha.
Sidaasi awgeed, mudane Jamaal ayaa soo jeediyay in loo baahanyahay sharci kala hagaya oo kala caddeynaya, meesha ay ka bilaabmayaan shaqooyinka hay’addaha NGO-yadda ah iyo meesha ay ku dhammaanayaan shaqooyinkooda, iyo sidii hay’addahan shaqooyinka ay ugu wareejin lahaayeen wasaarradaha ay tahay shaqadooda.
“Sidoo kale waxyaabo badan oo dalka soo gala, sida deeqaha iyo mashaariicda waxaa gacanta ku haya hay’addahaasi aan dowliga aheyn. Waxaad arkeysaa madax Soomaaliyeed, wasiir, xildhibaan ama madax kale oo laga yaabo in deegaan uu wax uga fuliyo oo laga yaabo in NGO uu maro oo uusan marin hay’ad dowladeed, waxaa dhacda in shaqooyin ay deegaankooda ay hay’addaha uga raadiyaan mashaariic, meeshii ay aheyd in deegaanka ay tagto wasaarada, kadiba ay u yeerto hay’addii shaqada qabata”, ayuu yiri.
Ra’iisul wasaaraha iyo Beesha Caalamka oo ka wadda-hadlay doorashooyinka iyo dhammeystirka dastuurka